Umatshini oPhezulu weMveliso yeChapati CPE-800 yoMvelisi kunye neFektri | I-Chenpin
Zenzekelayo Intlama Laminator Production Line
Ubungakanani (L) 22,510mm * (W) 1,820mm * (H) 2,280mm
Umbane 3 Isigaba, 380V, 50Hz, 80kW
Umthamo 3,600-8,100 (ii-pcs / hr)
Umzekelo No. I-CPE-800
Ubungakanani beendaba I-80 * 80 cm
Isitovu Amanqanaba amathathu
Ukupholisa Inqanaba le-9
I-Counter Stacker 2 umqolo okanye 3 umqolo
Ukusetyenziswa ITortilla, iRoti, iChapati, iBurrito
IChapati (enye ichazelwe i-chapatti, i-chappati, i-chapathi, okanye i-chappathi, ekwabizwa ngokuba yi-roti, i-rotli, i-safati, i-shabaati, i-phulka kunye (kwi-Maldives) i-roshi, isonka esingenagwele esivelisiweyo esivela e-Indian subcontinent kunye nesiseko e-India, Nepal, Bangladesh. , Pakistan, Sri Lanka, eMpuma Afrika, Arabia kunye Caribbean.Chapatis zenziwe ngomgubo lonke-wengqolowa eyaziwa ngokuba Atta, ixutywe intlama ngamanzi, ioli kunye netyuwa ozikhethelayo a isitsha ukuxuba ngokuba parat, kwaye esojiwe tava (flat skillet) sisiqhelo
esiqhelekileyo kwi-Indian subcontinent kunye naphakathi kwabaphambukeli abavela e-Indian subcontinent kwihlabathi liphela.
Uninzi lwechapati ngoku lwenziwa ngumatshini oshushu oshushu. Ukuphuhliswa kwesonka esitshisiweyo esishushu yenye yezobuchwephesha beChenPin. Umatshini wokushicilela oshushu ubushelelezi kubume bomphezulu kwaye uqengqeleka ngakumbi kunenye chapati.
Njengoko ixesha lidlulile imfuno yabathengi yesiphumo esiphezulu semveliso kwi-CPE-800 Model.
■ Amandla e-CPE-800 Model: Cinezela iziqwenga ezili-12 zee-intshi ezi-6, ii-9pcs ze-intshi eziyi-10 nee-4pcs eziyi-12 intshi ezibaleka ngemijikelo eli-15 ngemizuzu.
■ Ukulawulwa okuphezulu kokuma kwemveliso ngexesha lokucinezela ukwandisa ukungqinelana kwemveliso ngelixa unciphisa inkunkuma.
■ ulawulo lokushisa oluzimeleyo kuzo zombini iipleyiti ezishushu
■ Isithuthi sokuhambisa ibhola: Umgama phakathi kweebhola zentlama ulawulwa ngokuzenzekelayo zizivamvo kunye nomqolo we-4, 3row kunye no-3 umqolo wokuhambisa ngokobungakanani bemveliso yakho.
■ Kulula, ngokukhawuleza kwaye kulula ukutshintsha ibhanti yokuhambisa iTefon.
Inkqubo yesikhokelo esizenzekelayo seTeflon yokuhambisa umatshini oshushu.
■ Ubungakanani: 4.9 yeemitha i-oveni ende kunye nenqanaba le-3 eliya kuphucula ukubhaka kwe-tortilla macala omabini.
■ Ukuchasana nobushushu besitovu somzimba. Ilangatye lesitshisi elizimeleyo kunye nomthamo wolawulo lwegesi.
■ Inkqubo yokupholisa: Ubungakanani: 6 yeemitha ubude kunye nenqanaba le-9 elinika ixesha elininzi lokupholisa kwi-tortilla ngaphambi kokupakisha. Ukuxhotyiswa ngolawulo lwesantya esiguqukayo, ukuqhuba okuzimeleyo, izikhokelo zokulungelelanisa kunye nolawulo lomoya.
Acc Qokelela ingqokelela yee-chapati kwaye uhambise i-chapati kwifayile enye ukondla ukupakishwa. Uyakwazi ukufunda iziqwenga zemveliso. Ukuxhotyiswa ngenkqubo yomoya kunye ne-hopper zisetyenziselwa ukulawula ukushukuma kwemveliso ukuyifumbathisa ngelixa igcwele.
Previous: Umatshini wokuvelisa umgca weRoti CPE-800
Next: Imveliso yeLavash Line Machine CPE-800
NO.9 Dongkai Road, Dongjing Town, isithili saseSongjiang, eShanghai
Umatshini wokuvelisa ngokuzenzekelayo weLacha Paratha, Dough Laminator Production Line, Automatic Dough Laminator Machine, Dough Laminator Machine, Dough Laminator Line, Croissant Lamination Machine,